Inona no atao hoe Magnesium L-threonate?
Manezioma L-threonate (778571-57-6) miavaka amin'ny endriny pilina pilina manezioma mora azo indrindra eny an-tsena ankehitriny. Ny magnesium dia mineraly iraisana izay misy amin'ny sakafo isan-karazany ary tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny olombelona satria ampiasaina amin'ny fihenan'ny sela mihoatra ny 600 ao amin'ny rafitry ny vatanao.
Ny magnesium L-threonate dia nopotserina tamin'ny anarana hoe Magtein ary io no fanafody tokana voaporofo fa mahomby amin'ny fanatsarana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha. Ny taova na sela rehetra ao amin'ny vatanao dia mila maneziôma hanatanterahana tsara ny asany. Ity mineraly ity dia manampy amin'ny fahasalaman'ny taolana, ny hozatra, ny fo ary ny fiasan'ny ati-doha.
Amin'ny lafiny iray, magnesium koa dia manampy amin'ny fitsaboana ny olana amin'ny torimaso. Misy karazan-tsakafo magnesium maro eny an-tsena ankehitriny, anisan'izany ny magnesium oxide, magnesium citrate, ary magnesium chloride. Ireo endrika ireo dia ampiasaina hanatsarana ny haavon'ny mineraly ao amin'ny vatana ary hanampy amin'ny fampiroboroboana ny hetsika sela sy organika.
Ny vaovao tsara dia magnesium L-threonate vovony dia mora azo amin'ny Internet na amin'ny fivarotana ara-batana manodidina anao. Na izany aza, alao antoka fa ahazoanao fanafody any amin'ny mpitsabo ny valin'ny fanafody.
Raha mahasoa amin'ny rafi-batana ny magnesium L-threonate dia mety hitarika fiantraikany ratsy izany rehefa diso tafahoatra na overdosed. Tahaka ny rehefa maka nootropic hafa, ny fampidiranao ny dokotera amin'ny fizotran'ny dosage dia manome antoka anao ny vokatra tsara sy mahavariana.
Ahoana no Manezioma L-threonate miasa?
Ny asan'ny magnesium L-threonate dia ny fampitomboana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny rafitry ny vatanao ary manampy amin'ny fanatsarana ny sela sy ny taovanao miasa. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny magnesium dia manana anjara toerana lehibe hanampiana ny fiasa tsara amin'ny sela ao amin'ny vatanao.
Magnesium mineraly dia misy amin'ny sakafo isan'andro izay hanina saika isan'andro. Na izany aza, mety hihena ny haavon'ny mineraly ary manala anao amin'ny toe-pahasalamana samihafa. Ohatra, ny haavon'ny magnesium ambany dia mety hiteraka olana ara-pihetseham-po, fahaketrahana, tebiteby, palpotra ny fo, aretin-doha, ary migraine. Ny atleta koa dia mijaly amin'ny foza sy hozatra vita amin'ny hozatra rehefa tsy manana magnesium ampy amin'ny rafitra vatany izy ireo.
Eo an-tampon'ny magnesium mahasalama misy sakafo, raha tsy ampy ny mineraly mba hahamora ny fampandehanana tsara ny sela sy ny taovao, dia mety hanoratan'ny dokotera anao ny Magnesium L-threonate. Tsy mitovy ny vatan'olombelona ary noho izany tsy ny rehetra no hiaina olana mitovy rehefa mijaly amin'ny tsy fahampian'ny magnesium izy ireo. Na izany aza, ny Magnesium L-threonate dia nanaporofo fa be menaka manjelatra mahery vaika. Miankina amin'ny tsy fahampian'ny magnesium anao, ny Magnesium L-threonate dia manome tombony lehibe rehefa ampiasaina tsara.
Vantany vao maka ny fatra amin'ny Magnesium L-threonate ianao dia iharan'ny haingana ny fanafody ao anaty vatanao ary manomboka miasa saika eo no ho eo. Ny magnesium ampy amin'ny vatanao dia mihatsara kognitif function ary ny fitadidiana, manatsara ny fampandehanana tsara ny hozatra vatana sy ny hozatra ary koa manentana ny faritra hafa amin'ny vatana. Ao amin'ny vavoninao, ny mineraly magnesium dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanavanana ny asidra amin'ny vavony ary manamora ny hetsika mihetsika amin'ny alàlan'ny tsinainy.
Wisepower dia mpanamboatra mivantana ny akora mantra manezioma L-threonate,
fahafaha-mamokatra isam-bolana hatramin'ny 3,000KG.
Is Manezioma L-threonate tsara matory?
Eny, tsara ho an'ny torimaso ny Magnesium L-threonate. Betsaka ny olona manana olana rehefa resaka torimaso tsara, ary manimba ny tsingerin'ny insomnia dia mety ho sarotra tokoa. Azonao atao ny manova ny fahazaran-torimasonao na mampihena ny fihinanana kafeinina aza nefa mbola tsy mahomby amin'ny hahazoana ny vokatra irina. Na izany aza, ny fisakafoanana toy ny Magnesium L-threonate dia afaka manampy anao matory tsara.
Ny mineraly toa ny magnesium dia misy fiantraikany isan-karazany amin'ny rafitry ny vatanao izay mamporisika ny torimaso. Noho izany, tsy fisian'ny magnesium mety hitarika ho amin'ny toe-pahasalamana izay miteraka tsy fahazakana. Ny Magnesium L-threonate, noho izany, dia hanatsara ny fiasan'ny vatana sy ny sela izay hanampy anao hatory amin'ny farany. Ho fampiroboroboana ny magnesium torimaso dia manana andraikitra manaraka ireto amin'ny vatanao;
(1). Ampio hiala voly ny vatanao sy ny atidohanao
Mba hahazoana torimaso tsara dia tsy maintsy miala sasatra ny atidohanao sy ny vatanao. Ny haavon'ny magnesium ampy amin'ny rafitry ny vatanao dia manampy amin'ny fialan-tsasatra amin'ny sainao sy ny vatanao amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny rafi-pitatitra parasympathetic izay tompon'andraikitra amin'ny fampitony sy miala voly ny rafitry ny vatanao. Ny magnesium dia mifehy ny neurotransmitters, izay tompon'andraikitra amin'ny fandefasana mari-pamantarana manerana ny atidohanao sy ny vatanao. Amin'ny lafiny iray, izy ireo dia mifehy ny hormonina melatonin izay tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny fizotry ny torimaso.
Ny Magnesium dia mamatotra amin'ny gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors, izay neurotransmitter tompon'andraikitra amin'ny fampitony ny hetsika nerve. Ny GABA dia mitovy neurotransmitter ampiasaina amin'ny famokarana fanafody torimaso toy ny Ambien. Ny fanamafisana ny rafi-pitatitra dia manomana ny sainao sy ny vatanao mba hatory.
(2). Manelingelina ny torimaso ny tsy fahampian'ny manezioma
Ny tsy fananana mineraly manezioma ampy fotsiny ao amin'ny rafitry ny vatanao dia miteraka olana amin'ny torimaso na tsy fahitan-tory. Noho izany, ny magnesium L-threonate dia zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny haavon'ny mineraly ao amin'ny vatanao mba hiantohana ny torimaso tsara. Ny fandinihana ara-pitsaboana dia mampiseho fa ny ambaratonga magnesia tsara indrindra dia tena ilaina amin'ny torimaso ara-dalàna. Na izany aza, ny ambaratonga magnesium avo sy ambany dia mety hiteraka olana amin'ny torimaso, ary izany no antony nanolorana anao handeha ho amin'ny fizaham-pahasalamana alohan'ny hanombohanao mandray manezioma L-threonate levitra.
Ny antony samihafa sy ny toe-pahasalamana dia mety miteraka tsy fahampiana magnesium. Ohatra, ny aretina mandevon-kanina izay misy fiantraikany amin'ny digestive tract dia mety hanasarotra ny vatanao handrehitra mineraly sy otrikaina tsara, mitondra amin'ny tsy fahampiana magnesium. Ny diabeta sy ny fanoherana ny insuline dia mifandray ihany koa amin'ny fahaverezan'ny magnesium faobe.
Zava-dehibe koa ny taona, rehefa misakafo miaraka amin'ny magnesium latsaky ny olon-dehibe ny olon-dehibe. Midika izany fa ny be taona dia tandindomin-doza noho ny soritr'aretina tsy fahampian'ny magnesium toy ny olana amin'ny torimaso. Ny mpimamo toaka be loatra dia mety tsy ampy mineraly koa. Ny magnesium ampy dia midika fa hahita torimaso tsara ianao, ary eo no tonga tsara ny Magnesium L-threonate.
(3). Mifehy ny kalitaon'ny torimaso
Magnesium dia manampy anao hanana torimaso milamina sy lalina. Ny fiantraikan'ny mineraly amin'ny rafi-pitatitra dia mamela anao hatory amin'ny alina tsara. Manakana ny molekiola ny magnesium tsy mifamatotra amin'ny neuron, ka mampitony ny rafi-pitatitra, izay mahatonga ny torimaso tsara. Ny fandinihana samihafa dia naneho ny maha-zava-dehibe ny magnesium amin'ny fampiroboroboana ny torimaso. Ankehitriny, ny fanadihadiana dia nanamafy ny fiantraikan'ny magnesium amin'ny famahana ny olana amin'ny torimaso eo amin'ireo olon-dehibe.
ati-doha rmanangona impact an'ny Magnesium L-Threonate
Ny magnesium L-threonate dia nopotserina taorian'ny fahitana ny fahafahany manatsara ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha. Vetivety dia tafiditra ao amin'ny rafitry ny vatana ity zava-mahadomelina ity ary miditra ao an-tsaina mba ahafahan'ny maneziôma mamerina ny soritr'aretin'ny fahanteran'ny ati-doha toy ny aretin-tsaina (ADHD). izany ADHD mivoatra tsikelikely mandritra ny taona maro, ary mety ho sarotra ny hahatsikaritra azy io amin'ny ambaratonga voalohany, fa ny toe-javatra dia mifandray amin'ny fihenan'ny kognitif.
Ny zokiolona dia misakafo miaraka amin'ny magnesium kely, izay manazava ny antony mahatonga ny tsy fahampian'ny magnesium eo amin'izy ireo. Misy ihany koa ny toe-pahasalamana hafa toy ny olan'ny digestive sy ny diabeta izay mampihena ny haavon'ny magnesium ao amin'ny vatana. Ny Magnesium dia manatsara ny fahaizan'ny asan'ny taolana isan-karazany, ny sela hozatra ary ireo taova vatana.
Ny tsy fahampian'ny magnesium ao amin'ny atidoha dia miteraka olana toy ny aretin'ny torimaso, tebiteby, ny hakiviana ary koa misy fiantraikany amin'ny fahatsiarovana sy ny fahatsiarovan-tena. Na izany aza, mety ho miovaova ny fiantraikan'ny olona iray mankany amin'ny olon-kafa, fa afaka mamaha azy ireo kosa ny magnesium L-threonate amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny fitrandrahana mineraly ao amin'ny atidohanao.
Ny fandalinana sy fitsapana samihafa momba ny fitsaboana dia nanaporofo ny hery manezioma L-threonate manodina ny rafitra fahanteran'ny ati-doha. Ny fikarohana izay niavaka dia rehefa hita fa ny magnesium L-threonate dia afaka mamadika mihoatra ny sivy taona ny vokatry ny fahanton'ny ati-doha. Ity zava-mahadomelina ity dia mampitombo ny hakitroky ny synapses, izay fifandraisana eo anelanelan'ny selan'ny atidohanao - ny fahaverezan'ny hakitroky synaptika dia miteraka fihenan'ny kognitika sy fihenan'ny ati-doha.
Ny fandinihana dia mampiseho fa ny 12-herinandro ny fitantanana Magnesium L-threonate dia manandratra fampandrenesana kognitif ary mamadika ny fahanterana amin'ny atidoha. Matetika ny atidoha dia mihena rehefa mihalehibe ianao noho ny fihenan'ny isa sy ny sela selan'ny atidoha ary ireo switchboard serebral azy, izay antsoina hoe synapses.
Ny fahaverezan'ny synapses no antony voalohany mahatonga ny fihenan'ny kognitika. Noho izany, ny fahaizan'ny magnesium L-threonate manatsara ny hakitroky ny synapses dia mahatonga azy io ho fahatsiarovana tsara indrindra sy fampitomboana kognitif tsara indrindra eo amin'ny tsena ankehitriny. Raha vantany vao ampy ny haavon'ny magnesium ao amin'ny atidohanao dia azonao antoka ny mamadika ny olan'ny fahanteran'ny ati-doha. Ny fizaham-pahasalamana mialoha, mandritra, ary aorian'ny tsingerin'ny fatra dia ilaina amin'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fanafody.
Inona koa tombony azo avy amin'ny magnesium L-threonate?
Ny fahasalamana ao amin'ny atidoha ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso dia tsy ny tombony azonao alaina amin'ny fakana Magnesium L-threonate. Manana zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny fahaizan'ny sela rehetra sy sela amin'ny vatanao ny zava-mahadomelina. Ny magnesium dia mineraly tena ilaina izay ilain'ny vatanao. Ireto ny sasany Mahasoa an'ny Magnesium L-threonate;
(1). Hamaivana ny famoizam-po sy ny fanahiana
Ireo toe-javatra roa ireo dia tena mahazatra amin'ny olona maro ankehitriny, ary antony maro samihafa no mahatonga azy ireo. Na izany aza, manaporofo ny fahaizany mifehy sy manamaivana ny fahaketrahana sy ny tebiteby ny magnesium. Matetika indrindra ireo toe-tsaina roa ireo dia mifandray amin'ny tsy fahampian'ny magnesium. Noho izany, raha tsy ampy an'io mineraly io ao amin'ny atidohanao, dia azo inoana fa hiharan'ny fahaketrahana sy tebiteby.
Ny fahaizana manezioma mampitony ny rafi-pitabatabana dia manampy amin'ny fanamaivanana ireo aretin-tsaina roa. Ny tebiteby magnesium L-threonate dia tokony horaisina eo ambanin'ny torolalan'ny dokotera mba hahitana vokatra tsara kokoa.
(2). Mampiroborobo ny taolana sy hozatra mahasalama
Ny tsy fahampian'ny magnesium dia mitarika amin'ny sakoroka tongotra sy taolana malemy, amin'ny ankapobeny dia efa antitra. Magnesium L-threonate koa dia afaka mitsabo osteoporosis izay fahita mahazatra amin'ny olon-dehibe. Amin'ny lafiny iray, ny atleta dia mandray ity zava-mahadomelina ity mba hanampiana azy ireo ho fanarenana ny hozatra aorian'ny fanazaran-tena sy ho an'ny famokarana angovo aerobika sy anaerobika.
Ny tombotsoan'ny magnesium L-threonate dia betsaka, ary ny fanafody dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany. Ohatra, ny zava-mahadomelina dia ampiasaina mba hanamaivanana ny fanaintainana aorian'ny hysterectomy, fandidiana, ary ny fanaintainan'ny tratra vokatry ny arterina voahitsoka. Ny magnesium L-threonate koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitsaboana ny fahaverezan'ny fihainoana, diabeta, fibromyalgia, ary ny fihenan'ny haavon'ny kolesterola amin'ireo toe-pahasalamana hafa.
Ohatrinona Manezioma L-threonate tokony handray aho?
Manezioma L-threonate dia fanafody am-bava nalaina tamin'ny vava. Ny fanafody dia misy amin'ny endrika takelaka sy vovoka. Na izany aza, dosie magnesium L-threonate Miankina amin'ny mpampiasa sy ny fepetra eo ambanin'ny fitsaboana. Ny dokotera no ho olona mety tsara indrindra hametraka ny fatra mety ho anao. Na eo aza ny soso-kevitr'ireo mpanamboatra dia mandeha hatrany amin'ny fizaham-pahasalamana satria ny rafitry ny vatan'olombelona dia tsy mitovy.
Ny fatra magnesium L-threonate voalaza ho an'ny 19-30 taona dia 400mg (lehilahy) ary 310mg isan'andro ho an'ny vehivavy. Mandritra ny 31 taona no ho lehibe ny lehilahy dia tokony mihinana 420mg sy vehivavy 320mg isan'andro. Ny Recommended dietary allowance (RDA) ho an'ny vehivavy bevohoka eo anelanelan'ny 14 ka hatramin'ny 18 taona dia 400mg, raha ireo avy amin'ny 19-30 taona dia 350mg ary 31-50 taona dia 360mg.
Ny vehivavy lactating dia afaka mihinana an'io fanafody io ihany koa manaraka; 14-18 taona 360mg isan'andro, 19-30 taona ny fahazoan-dalana hidirana dia 310mg raha 31-50 taona ny fatra eo amin'ny 320mg. Ny dosage ambony-magnesium L-threonate isan'andro ho an'ny olona mihoatra ny valo taona dia 350mg, ary misy koa ny vehivavy mampinono sy vehivavy bevohoka.
Magnesium L-threonate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny toe-pahasalamana samihafa, ary ny fatra dia miovaova amin'ny mpampiasa iray hafa. Ohatra, amin'ny fitsaboana indigestion (dyspepsia), ny fatra azo avy amin'ny 400-1200mg dia tokony hizara hatramin'ny efatra isan'andro isan'andro.
Ho an'ny tombontsoa azo avy amin'ny kognitifika tsara indrindra, ny fatra inolom-bidy dia tokony ho alaina 1000mg indroa isan'andro. Rehefa maka Magnesium L-threonate amin'ny olana amin'ny torimaso, ny fatra marina dia eo amin'ny 400-420mg isan'andro isan'andro ho an'ny lehilahy ary 310-360mg ho an'ny vehivavy. Ao amin'izy rehetra, ny Magnesium L-threonate (778571-57-6) ny fatra dia miovaova amin'ny mpampiasa iray mankany amin'ny iray hafa; noho izany, alao antoka ianao fa mahazo ny fanafody mety amin'ny fanafody.
WNy sakafo satroka dia ambony ao Manezioma L-threonate?
Ankoatra ny fakana Manezioma L-threonate hanatsarana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny atidohanao, azonao atao ihany koa ny manararaotra ny sakafo manankarena amin'ireo mineraly ireo. Ireo sakafo ireo dia afaka manampy anao hahatratra ny ambaratonga manezioma ilaina ao an-tsainao sy hankafizanao ny tombo-tsoa mineraly rehetra. Ireto misy sasany amin'ireo sakafo ambony manan-karena amin'ny Magnesium L-threonate;
Dark Chocolate- arakaraka ny matsiro sy mahasalama no mitondra magnesium 64mg izay 16% ny RDI. Ankoatra izany, ny sôkôlà maizina dia manankarena koa amin'ny varahina, vy, ary manganohano ary koa ny fibre prebiotic.
zavokà- ity voankazo matsiro sy mahasalama ity dia afaka manome anao ny magnesium 58mg izay manodidina ny 15% amin'ny RDI. Ny voankazo koa dia manankarena vitaminina B, K, ary loharano potasioma be dia be.
Nutsare- fantatra ihany koa ho iray amin'ireo loharano voajanahary Magnesium L-threonate tsara indrindra. Ny fananana goavam-bola 1-mita dia manana magnesium 82mg izay 20% amin'ny RDI.
Legumessuch- satria be dia be ny mineraly isan-karazany, toy ny magnesium, voanjo, voanjo, tsaramaso, ary tsaramaso soja. Ohatra, ny kaopy iray amin'ireo voaniho nahandro dia misy magnesium 120mg, ary izany no 30% amin'ny RDI.
Misy sakafo hafa toa ny Tofu, chia voa, voatavo voatavo, trondro matavy, mba horesahina vitsivitsy. Mifanakaloza hevitra amin'ny mpitsabo otrikaina anao raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ireo sakafo manankarena ireo.
Buy magnésium L-threonate an-tserasera
Magnesium L-threonate vovoka dia fanafody mora azo na amin'ny magazay ara-batana na an-tserasera. Azonao atao ny mividy an'io fanafody io amin'ny fampiononana ao amin'ny biraonao na any an-tranonao ary miandry ny fandefasana izay tokony hataon'ny mpamatsy azo antoka ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Mankanesa amin'ny dokotera anao mba hitarika anao amin'ny fahazoana Magnesium L-threonate kalitao ary avy amin'ny mpivarotra malaza sy za-draharaha. Samy hafa amin'ny Internet Nootropics depot stock this drug anisan'izany ny Walmart, Amazon, ary Magnesium L-threonate vitamin Shoppe.
Misy koa mpivarotra an-tserasera hafa fa ataovy foana ny fikarohana ataonao mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny mpivarotra Nootropic alohan'ny hanaovana ny baikoo. Ny fividianana magnesium L-threonate dia tokony hokarakaraina amin'ny fikarakarana toy ny fihinanana fanafody tsy dia manara-penitra, na fanafody sandoka dia mety hampidi-doza anao.
Vakio ny hevitra Nootropics hahafantarana bebe kokoa momba ireo mpivarotra an-tserasera Magnesium L-threonate manerantany. Amin'izao fotoana izao, ny magnesium L-threonate amazon sy Magnesium L-threonate Walmart no loharano Nootropic malaza indrindra. Ny fivarotana an-tserasera no tsara indrindra satria mamela anao hiantsena amin'ny karazany hafa izy ireo Fanampin-tsakafo Nootropic amin'ny alàlan'ny telefaona, solosaina, na tablety Topazo maso fotsiny hoe mandra-pahoviana ny vokatra hoentina halefa any amin'ny toerana misy anao ary hisafidy ny fifanakalozana tsara ho anao.
Ny magnesium dia mineraly tena ilaina amin'ny fampiroboroboana ny fiasan'ny kognita, ny fanatsarana ny torimaso, ary ny fihenan'ny soritr'aretin'ny fahanton'ny ati-doha ary koa ny fanatsarana ny sela sy ny taova miasa. Misy samy hafa loharano magnesium, manomboka amin'ny fanafody ka hatramin'ny sakafo voajanahary. Ny tsy fahampian'ny manezioma dia mampiseho ny olona amin'ny toe-pahasalamana isan-karazany toy ny ADHD. Na izany aza, ny fampivoarana ny Magnesium L-threonate ADHD dia vaovao tsara ho an'ny olona ambany tahan'ny magnesium satria voaporofo fa zava-mahadomelina mahery vaika amin'ny soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny mineraly. Ny fanafody dia ampiasaina amin'ny fampiasana fitsaboana hafa toy ny fanamaivanana ny fanaintainana aorian'ny fandidiana sy ny fanamafisana ny taolana sy ny fahasalaman'ny hozatra.
Raha jerena ireo hevitra isan-karazany magnesium L-threonate, dia afaka milaza ianao fa anisan'ireo loharano magnesium be indrindra. Magnesium L-threonate dia fanafody ara-dalàna, saingy tokony hitondra izany eo ambanin'ny filazan'ny dokotera ianao hahazoana vokatra tsara kokoa. Hita any amin'ny fivarotana ara-batana na an-tserasera ihany ny fanafody. Aza atao mihitsy ny manamboatra ny fatra amin'ny midina na ambony. Raha sendra misy fiantraikany amin'ny lafiny hafa dia mifandraisa avy hatrany amin'ny fanafody anao. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny magnesium L-threonate sy ny hafa mividy nootropika, manatona miaraka amin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana.
Sun, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Ny fifehezana ny hakitroky ny synaps amin'ny rafitra sy ny fomban'ny L-threonate amin'ny alàlan'ny fanodinana ny fifantohana magnesium intraneuronal. Neuropharmacology, 108, 426-439.
Mazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Fihetseham-po amin'ny Catalase (CAT), ALT ary AST amin'ny karazany samihafa amin'ny totozy Swiss Albino voatsabo amin'ny Lead Acetate, Vitamin C ary Magnesium-L-Threonate. Gazetin'ny fikarohana klinika sy diagnostika, 11(11).
Mickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Manezioma-L-threonate fihinanana sakafo maharitra dia mandringana ny fahaverezana ary mampihena ny fanarenana tampoka ny fanilihana tsiro. Pharmacology Biochemistry sy ny fitondran-tena, 106, 16-26.
Abumaria, N., Luo, L., Ahn, M., & Liu, G. (2013). Manampy ny manasaraka ny fizarazarana eo amin'ny sehatry ny habakabaka ny fanampiana magnesium ary misoroka ny tahotra be loatra. Fanafody momba ny fitondran-tena, 24(4), 255-263.
1.Inona ny Magnesium L-threonate?
2.Manao ahoana ny asan'ny Magnesium L-threonate?
3.Mety natory ve ny Magnesium L-threonate?
4. Brain averin ny fiantraikan'ny Magnesium L-Threonate
5. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny magnesium L-threonate?
6.Firy ny Magnesium L-threonate no tokony alaiko?
7.Inona no sakafo avo ao Magnesium L-threonate?
8.Buy Magnesium L-threonate an-tserasera